Wardoonayaal ka tirsan Alshabaab oo la xukumay. | Shabakadda Garsoor
Home Maxkamadda Ciidanka Wardoonayaal ka tirsan Alshabaab oo la xukumay.
Muqdisho (Garsoor)- Maxamed Cabdi Salaad Nuur iyo Gacal Maxamed Cali Maxamed ayaa loo heystaa in ay ka wada tirsan yihiin maleeshiyada Alshabaab gaar ahaan kooxda ay ugu yeeraan Amniyaadka, waxaana ciidamada amniga ka soo kala qabteen degmooyinka Cabdiczaziiz iyo Wartanabadda.
Previous articleAskari dhac geystay oo ay Maxkamadda Ciidamada xukuntay.
Next articleAskar ka soo baxay aag dagaal oo la xukumay